एअरबस एक्क्सओक्सएक्स परिवार मेगा प्याक FSX र P320D संस्करण3मा कसरी स्वतः सक्रिय गर्नुहोस्
प्रश्न एअरबस एक्क्सओक्सएक्स परिवार मेगा प्याक FSX र P320D संस्करण3मा कसरी स्वतः सक्रिय गर्नुहोस्
10 महिना2सप्ताह पहिले #1075 by CaptZhade
मैले अब एयरबस एक्क्सम्युक्स परिवार परिवार मेगा पैक FSX र P320D संस्करण3को शानदार प्याकेज डाउनलोड गरेको छु।
यद्यपि, मेरोसँग समस्या छ।
जब पनि मैले टाउको दुख्छु, म autopilot सक्रिय गर्न सक्दिन। म कसरी गर्छु? म यसलाई कसरी चढ्ने, उक्ल, उचाइ र यति बनाउछु?
खुसी हुन सक्छ यदि कसैले मलाई यो व्याख्या गर्न सक्छ।
उत्कृष्ट प्याकेजको लागि धन्यबाद।
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 16
10 महिना2सप्ताह पहिले #1081 by DRCW
के तपाईं FSX मा airbus 321 पूर्वनिर्धारित संग परिचित हुनुहुन्छ? यदि तपाईं हुनुहुन्छ र यो मेगा प्याकेजमा काम गरिरहनु भएको छैन ... त्यसपछि तपाईंको हवाई जहाज फोल्डरबाट फाइल मेटाउनुहोस्। इन्टरनेट सुरक्षा बन्द गर्नुहोस् र फेरि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहोस् ... यदि तपाईंलाई जान्न आवश्यक छ भने मलाई थाहा दिनुहोस्
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.237 सेकेन्ड